Anslow 3D HD Cinema Xiaomi Smart Home Appliances Xiao Ai Smart Door Tshixa Indlu Yasekhaya One 2 Igumbi 1 Iholo 1 Ikhitshi 1 Igumbi lokuhlambela eli-1 Igumbi lokuhlambela linokupheka umatshini wokuvasa ifriji unoKuchola uLoliwe kwindawo yokuPaka simahla
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe ongu润明
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike u润明 iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ngumxholo wokuhlala ekhaya ogxile kwiimpawu zobuhlanga, ikhaya elihlakaniphile, elifudumeleyo kwaye limnandi, isitayile saseMongolia, ukuxubana kwale mihla kunye nobuhlanga, isitshixo esigcweleyo socango, i-wifi yasimahla! Yakhelwe ngaphakathi i-3D yenkcazo ephezulu ye-cinema, uthotho lwezixhobo zekhaya ezihlakaniphileyo; ibhedi enkulu yelatex yodidi oluphezulu, ifenitshala yomthi oqinileyo, iikhabhathi zasekhitshini, iikhabhathi zegumbi lokuhlambela; zonke iintlobo zezixhobo zasekhitshini ezinjengezitya, iimela, izikhafula, izitya kunye namacephe. ; psychology ezahlukeneyo, ubuntu, yaye Iincwadi ezikhuthazayo zikuvumela ukuba ibhabhe ngokukhululekileyo elwandle ulwazi. Sikhonza ngentliziyo, siphucula umgangatho ngothando, kwaye siqokelela abantu ngothando, kwaye sizame ukwenza wonke umthengi abe namava amahle nanothando.
I-Anman Mongolia lolona khetho lwakho lufanelekileyo lokuhamba kosapho, ukuhlangana kwabahlobo, amatheko omhla wokuzalwa, kunye nesibini esithandanayo.
Vumela ukuba wonwabele amava akrelekrele ngelixa uphumle!
Vumela usafumana ubushushu bekhaya ngelixa uphumile!
Vumela ufumane ichweba lomphefumlo wakho ngelixa uxakekile!
Nceda wehlise isantya sexesha ngexesha lakho lokuphumla, vumela ubuqu bakho obulahlekileyo budibane nelinye ikhaya, kwaye uvumele usapho olunesitayile saseMongolia kunye neempawu zobuhlanga zikukhaphe ukuze uphile ubomi obahlukileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- 润明
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ordos